L0vetodream waxay ka digeysaa inaan arki karno iMac Apple Silicon bisha Abril 20 | Waxaan ka socdaa mac
L0vetodream waxay ka digeysaa inaan arki karno iMac Apple Silicon 20-ka Abriil
El soo socota Abriil 20 Waxaan balan balaaran la leenahay Apple halkaas oo shirkadu ka bilaabi doonto munaasabada "guga la shubay" halkaasoo xanta ay muujineyso in shirkadu soo bandhigi karto qalab cusub Mareykanka waxaan sameynay soo jeedin intii aan arki lahayn. Waxay umuuqataa inaynaan awood u yeelan doonin inaan aragno qalin cusub oo Apple ah. Falanqeeyaha caanka ah ee caanka ah ee Apple iyo soo saaraha L0vetodream ayaa kugula taliyay taas iMac cusub ayaa imanaya.
Barta Twitter-ka subaxnimadan maanta, L0vetodream waxay soo bandhigtay sawirka farshaxanka martida ee Apple ee munaasabadda Abriil 20 oo ay weheliso sawirka G3 iMac safka oo leh dhammaan midabbada kala duwan. Gaar ahaan, tani waxay imaaneysaa ka dib markii L0vetodream ay mar sii horreysay tweet gareeysay sawir casuumaadda munaasabadda oo ay ku qorneyd "ku raaxeyso midabadan." Waxay u muuqataa in wararka xanta ah a cusub iMac iyo waliba midabbo kala duwan waxay noqon kartaa xaqiiqo.
Maaha markii ugu horeysay ee aan maqalno warkaan. Laakiin dabcan way sii kordheysaa markii ay taariikhda munaasabaddu soo dhowaato, taas oo sidaad ogtahay ay tahay Abriil 20keeda soo socota. Ma arki karnaa iMac iyo midabyo cusub? Ma ahan ikhtiyaar in aan iska fududeyno tixgelinta dhammaan ogeysiisyada laguugu sameynayo danahaaga. Dabcan, waxaa jira fursado badan oo lagu arko iMac cusub leh Apple Silicon ka badan AirTags.
Waxaan ka tagi doonaa shakiga soo socda Abriil 20 waxaanan arki doonaa haddii Apple dhab ahaantii soo saaro 24-inch iMac cusub iyo xitaa mid leh 30 ama 32 inji. Labaduba waxay la socdaan processor-ka cusub ee isu beddelaya bahal run ah iyo shaqo farshaxan. Qaarkood xitaa waxay yiraahdaan taas oo leh naqshad ku dhiirrigelisay Pro Display XDR. Hadda, waxaan rajeyneynaa in qiimaha uusan caqabad aheyn dhammaan kuwa doonaya inay la wareegaan qaabka cusub ee shirkadda Mareykanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » L0vetodream waxay ka digeysaa inaan arki karno iMac Apple Silicon 20-ka Abriil
Dukaammo badan oo Apple ah ayaa ka maqnaa 21,5-inji iMac
Docker wuxuu bilaabayaa barnaamijkiisa wada shaqeynta horumarinta ee barnaamijka M M1